राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी, को हुन् अधिकारी ? « Naya Page
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी, को हुन् अधिकारी ?
प्रकाशित मिति : April 6, 2020
काठमाडौं, २४ चैत : सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।
निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएपछि फागुन ५ गतेदेखि केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर खाली थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
को हुन् नयाँ गभर्नर अधिकारी ?
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा अधिकरी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर थिए। हाल अधिकारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारी अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका रोजाईका व्यक्ति हुन् । अधिकारी वि.सं.२०२० सालमा खोटाङमा जन्मिएका अधिकारी नेकपानिकटस्थ मानिन्छन्।
तत्कालीन गभर्नर नेपाल नियुक्ति हुँदासमेत अधिकारी गभर्नरका लागि तीनजनामा परेका थिए । नेपालले यही चैत ५ गते गभर्नरको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका थिए । सिफारिश समितिले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट दुईजना छान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै एकजना भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरमध्येबाट छान्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो । अधिकारीले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्ययन पूरा गरेका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पृष्ठभूमिबाट राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने उनी पहिलो व्यक्तित्व हुन् ।
राष्ट्र बैंकमा रहेर डेपुटी गभर्नरको महत्वपूर्ण भूमिकासमेत सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएका अधिकारी पछिल्लो चार वर्षदेखि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । अधिकारीले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गरेका थिए ।
बोर्डले संयोजन गरेका केही आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
यस्तै नेपाली साझेदारसहित चिनियाँ लगानीकर्ता समूहले होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै धादिङमा अर्को चिनियाँ समूहले ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । अधिकारीले ‘बिजिनेस एड्मिनिस्ट्रेशन’ मा सन् १९८९ मा स्नातक गर्नुभएको छभने भारतबाट १९९३ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको डिग्री लिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको वित्तीय व्यवस्थापन, बैंकिङ अफिस, बैंक सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा बसेर काम गरिसकेको अनुभव अधिकारीसँग छ ।
कोरोनाको कहरका कारण विश्वव्यापीरुपमा नै अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखापरेको छ । त्यसको असरबाट नेपालसमेत अछुतो रहनसकेको छैन । यस्तो विषम अवस्थालाई अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै लयमा ल्याउनु नै अधिकारीका लागि तत्कालको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्था र त्यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई कोरोनाले पार्ने प्रभाव कम गर्दै सही दिशामा लैजानसमेत उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
तत्कालीन गभर्नर डा नेपालले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गरेका केही सुधारमा समेत अधिकारीको भूमिका थियो । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अधिकारीले अघिल्ला गभर्नरले अगाडि बढाउनुभएको ‘बिग मर्जर’, बैंकिङ सुशासन र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागिसमेत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न : विप्लवले राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ?
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा वैशाख ७ गतेदेखि
यो विप्लवको सेफ ल्याण्डिङ हो, नेपाल शान्तिको युगमा प्रवेश गर्‍यो : प्रधानमन्त्री
नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड-माधव पक्षको ‘बहुमत’, प्रचण्ड दलको नेता
काठमाडौं, २१ फागुन । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे
अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यक्रममा मञ्चमै ढुङ्गामुढा, बोल्दा–बोल्दै छाडेर निस्किए
रुपन्देही, २१ फागुन । रुपन्देहीको मोतिपुरमा आयोजित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी कार्यक्रमलाई स्थानीयले अवरुद्ध बनाई
राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव
काठमाडौं, २१ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा
प्रहरीद्वारा सम्झना बोहराको हत्या अभियुक्त सार्वजनिक, जो आफै शव खोज्न सक्रिय थिए
कस्ता क्रुर बाबु : आफ्नै १८ वर्षीया छोरीको टाउको काटेर बोकेर गए प्रहरी चौकी
२०७७ फागुन २० गते बिहीबारको तपाईको राशिफल
फेल भएकालाई लाइसेन्स दिने सहसचिवसहित १७ कर्मचारीले पाए सफाइ
२०७७ फागुन १८ गते मंगलबारको तपाईको राशिफल
२०७७ फागुन १७ गते सोमबारको तपाईको राशिफल
२०७७ फागुन १६ गते आइतबारको तपाईको राशिफल
२०७७ फागुन १५ गते शनिबारको तपाईको राशिफल